Wikipedia:Sockpuppet - Wikipedia
Ny sockpuppet (avy amin'ny fiteny anglisy sock-puppet midika « marionety bà-kiraro ») dia anaram-pikambana fanampiny ampiasain'ny wikipedianina tokana. Izy io dia mety ampiasaina amin'ny fomba ara-dalàna, raha mitantana lisitra pejy arahi-maso. Izy io koa tsindraindray dia araraotin'ny olona mba hamorona kaonty iray ary mampifilafila mpikambana na fikambanana iray manontolo ; na koa mba ahafahan'ny olona iray manimba ny votoatin'ny wikipedia amin'ny alàlan'ny famoronana kaonty vaovao.
Tsy voarara eto ny fampiasana ny sockpuppet. Fa raha tsy mifanaraka amin'ny fitsipika napetraka teto amin'ny wikipedia ny fampiasana azy, dia mety ho voasakana (afaka adihevitra), ny anaram-pikambana/kaontim-pikambana nararaotina ary/na koa ny mpikambana namorona ilay kaontim-pikambana (afaka adihevitra).
Raha manana kaontim-pikambana maro ianao, dia ataovy :
Eo amin'ny pejim-pikambanao daholo ny kaonty ampiasainao ;
Ataovy mitovy ny anaram-pikambana manova ny lahatsoratra ovainao, na eo amin'ny lahatsoratra io, na eo amin'ny pejy fanapahan-kevitra io, na eo amin'ny pejin-dresaka io. Raha tsy manaja io fitsipika io ianao dia mety mitondra any amin'ny fanakanana na miserana na mandrakizay ny kaontim-pikambanao.
Izy fanaovana izy dia samihafa amin'ny mpikambana mampiasa rôbo, matetika nomena anarana araka ny mpikambana mampiasa azy sy ny satany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Sockpuppet&oldid=769961"
Dernière modification le 4 Aogositra 2015, à 22:26
Voaova farany tamin'ny 4 Aogositra 2015 amin'ny 22:26 ity pejy ity.